အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ ရန်ကနေ ပြည်သူကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ ပြည်သူ့ကြားကနေ ပေါက… – PVTV Myanmar
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ ရန်ကနေ ပြည်သူကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ဖို့ ပြည်သူ့ကြားကနေ ပေါက်ဖွားလာကြတဲ့ တိုင်းရင်းသားညီနောင်တွေနဲ့ ဒေသအခြေပြု ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေပူးပေါင်းပြီး ခုခံကာကွယ်စစ်တွေဆင်နွှဲလျက်ရှိကြသလို အောင်ပွဲတွေလဲ ရရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ ရှုံးနိမ့်မှုတွေ၊ တိုင်းရင်းသားညီနောင်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းတွေကို “ပြည်သူ့အောင်ပွဲ အထူးသတင်း” အနေနဲ့ စုစည်းတင်ဆက်ပေးထားတာကို နားဆင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 55K Share – 6652
2021-07-22 at 9:40 AM
ဝိသမေလာဘသမား အုပ္စု အလြန္အျမန္ က်ရွုံးပါေစ ျပည္သူ ကိုယ္စားျပု တပ္ဖြဲ့မ်ား တိုက္တိုင္း ေအာင္နိုင္ပါေစ
တော သား ကြီး says:
သတင်း မစ ခင် “ကဲ” ဆိုသော အသုံးနှုန်း ကြီး က ဘာကို ရည်ညွန်း တာလည်း။
Yi Yi Khine says:
2021-07-22 at 10:13 AM
ျမဝတီ ျမဝတီ says:
ေက်နပ္တယ္ အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ကို ေအာင္ေနၿပီ ေက်းဇူးပါ ဒို႔တပ္ေတြ ေဘးကင္းပါေစ
Wint Yee Lat says:
မညှိနဲ့ မရပ်နဲ့ ရရင် ရသလို ဆော် CDF, PDF အားလုံး ဘေးကင်း ကျန်းမာပါစေ။ စခ၊ စကစ အကုန် အသေဆိုးနဲ့ သေ။ 🙏🙏🙏
တပ်မဟာ KNU/KNLA PDF
2021-07-22 at 11:39 AM
2021-07-22 at 11:58 AM
မြို့ ရွာ ကျေးလက်ပါမကျန် နေရာစုံကနေ တိုက်ကြပါ စစ်သူပုန်းအကြမ်းဖက်တွေ ရည်ရှေးမခံနိုင်ပါဘူး သူတို့တွေစုစည်းလို့မရအောင် နေရာစုံကနေတိုက်ကြပါ
Ma Thae says:
ပြည်သူ့တပ်မတော် တိုင်းရင်းသားတွေ အောင်ပါစေ
Nyi Nyi Lin says:
2021-07-22 at 1:45 PM
2021-07-22 at 1:52 PM
နှစ်ဖတ် ကြည့်ပီး ကြေငြာပေးရင်​ကောင်းမယ်
သတင်းဆိုတာ အသံကျယ်ကျယ် အားနဲ့မှန်နဲ့ ကြေငြာ တာရယ် သတင်းအမှန်အကန် ပြောပြတာရယ် ကြိုက်တယ် pvtv
2021-07-22 at 4:50 PM
ကျေးဇူးပါ PVTV… KIA, KNU, PDF, CDF ပြည်သူ့စစ်သည် များအားလုံး ဘေးကင်းပါစေ။ တိုက်ပွဲတိုင်း ထိခိုက်မှုမရှိဘဲ အောင်မြင်ပါစေ။
2021-07-22 at 6:04 PM
ကျေးဇူးတင်လေးစားပါတယ် PVTV. KIA. KNU. PDF. တို့အားလုံးကို
Aung Than Zaw says:
2021-07-22 at 6:44 PM
PDF အားလုံးကျန်းမာဘေးကင်ကြပါစေ PV TV လည်းအထူးကျေးဇူးတင်အပ်ပါသည်။
2021-07-23 at 9:03 PM
တပၼဟာ KNU/KNLA PDF
လြမ္းအိမ္ကို နေြဦးတော္လွန္ရေး says:
2021-07-24 at 1:03 AM
KIA KNU PDF CDF
ျပည္သူ ့စစ္သည္အားလုံး ေဘးကင္း